Ameliorants Omia: faa'iidada codsiga - laga bilaabo 49% iyo wixii ka sareeya! - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Ameliorants Omia: faa'iidada codsiga - laga bilaabo 49% iyo wixii ka sareeya!
Shirkadda Swiss Omia waxay suuqa ruushka ku soo bandhigaysaa carrada hal-abuurka leh ee bacriminta-bacriminta laga sameeyay budada yar-yar ee kaalshiyamka kaarboonayt ee dabiiciga ah, iyo sidoo kale kalsiyum iyo magnesium. Omia Calcipril waxay ka kooban tahay 38% calcium saafi ah, Omia Maprill waxay ka kooban tahay 25% calcium iyo 9% magnesium.
Daawooyinka granular Omia Calcipril iyo Omia Magprill waxay leeyihiin ficil labanlaab ah - waxay ku quudiyaan dhirta kalsiyum iyo magnesium iyo, sababtoo ah qaab-dhismeedkooda ultramicronized, si deg deg ah, dhowr toddobaad gudahood, deoxidize ciidda. Isla mar ahaantaana, tilmaamayaasha bacriminta ciidda ayaa la wanaajiyey, taas oo gacan ka geysaneysa korodhka wax-soo-saarka iyo korodhka tayada badeecada ee horeba xilliga codsiga. Saamaynta codsigu waxay ku fidsan tahay dalagyada xiga.
Omia Calcipril iyo Omia Magprill waxay kordhiyaan wax-soo-saarka baradhada 5-39% (waxay kuxirantahay xaaladaha qoyaanka), wax-soo-saarka jajabka weyn wuxuu kordhiyaa 12,5-20%, muuqaalka diirka ayaa soo fiicnaanaya ( diiqada heerkulka ayaa laga saaray). Omia ameliorants ma keenaan qolof caadi ah.
Qiimaha dalagga dheeraadka ah ayaa bixiya kharashka isticmaalka daroogada, dakhliga dheeraadka ah ee 1 hektar wuxuu u dhexeeyaa 3620 ilaa 157160 rubles. (waxay kuxirantahay helitaanka waraabka), faa'iidada codsigu waa 49% iyo wixii ka sareeya.
Kordhinta wax-soo-saarka ganacsiga ee kaabashka cad waa 26,3%, dhacdooyinka naadiga kaabashka ayaa la dhimay 20,5%. Kordhinta wax-soo-saarka caleenta caleenta waxay gaartaa 48%, ku habboonaanta gaadiidka ayaa soo hagaagaysa.
Isticmaalka qalabka wax-soo-saarka ayaa tiknooloji ahaan horumarsan: codsiga waxaa lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo qaybiyeyaasha bacriminta caadiga ah, sidoo kale waa suurtogal in loo isticmaalo kala firidhsan iyo inta lagu jiro beeridda / beerashada wakhti kasta oo sanadka ah.
Iibka dawooyinka Omia Calcipril iyo Omia Magprill waxa kab dawladu sida hoos timaada barnaamijka Ciida Liming iyadoo laga soo celinayo dhammaan kharashyada 50%.
Tags: dawooyinOmiyakordhinta dhalidda baradhada
Soosaarayaasha Ruushka ee Bacriminta macdanta ayaa kordhiyay saadka alaabada ay u iib geeyaan suuqa maxalliga ah 38,2%
Xarunta Cilmi -baarista Federaalka ee Baradhada oo loogu magac daray A.G. Lorkha wuxuu ka qeyb qaatay "Dayrtii Dahabka-2021"